Wonke umama uzizwa ephethe impilo nempilo yengane. Futhi ngenxa yesimo esingavumelekile sezemvelo, izingane eziningi azizalwa ziphilile futhi. Lokhu kuqinisa kuphela isifiso esizwakalayo somama ukuvikela ingane yakhe kuzo zonke izinhlobo zezinkinga zezempilo. Namuhla, imithi isabisa omama abasha, bese kuthi kwezinye izimo zixilongwe "ngesifo esingelapheki." Indlela yokukhulisa ingane enempilo ephikisana nombono odokotela futhi ubheke ochwepheshe njengenqabile ngangokunokwenzeka? Sizothola namhlanje!
Ngokuvamile ukufuna umthombo onokwethenjelwa wolwazi nokuxilongwa, omama abasha baya ezincwadini ezihlukahlukene kakhulu, kudokotela abahlukahlukene. Ukubonisana nodokotela kuyadingeka futhi kuyadingeka, kodwa akuyona imfihlo kunoma ubani ukuthi imithi yesimanje inikeza izixazululo eziningi ezinkingeni ezikhulayo njengoba zingase zibe yinkinga. Ngezinye izikhathi udokotela ngesikhathi sokubonisana uqhathanisa nemingcele yentuthuko yengane yakho nge-generally accepted or averaged. Isibonelo, ukuqhathanisa ukuphakama nesisindo somntwana "ovamile", kukhona ithebhulethi ekhethekile lapho udokotela ehlolwe khona.
Uma isisindo noma ukuphakama kwengane kuhluke kumgomo, kuphakanyiswa ukuthi umntwana angondliwe ngefomula. Uma kwenzeka ezinye zingavumelani, ukwelashwa kwe-prophylactic kungenziwa. Isifiso somama ukuthola iseluleko siyaqondakala, udokotela ubonakala elula ulwazi, kanye naye kulula kakhulu ukuthatha umthwalo wempilo yengane, kodwa kufanele ukhumbule ukuthi kungakhathaliseki ukuthi uyamethemba kangakanani udokotela, iseluleko sakhe, noma kunjalo, awukwazi ukuthembela ngokungekho emthethweni. Ukunconywa ngalunye okuhlobene nokuthatha imithi, kubalulekile ukuhlola kabili nabanye ochwepheshe ababili.
Emiphumeleni yemithi emzimbeni womuntu, ungabhala incwadi yonke, ngisho nangaphezulu - mayelana nomthelela wabo emzimbeni wengane. Ngamafuphi, ungasho lokhu - uma ungakwazi ukugwema ukuthatha imithi, kufanele ugweme lokhu. Lokhu akusho ukuthi ochwepheshe kumele banqatshelwe noma bangabethembi. Ngokuqinisekile, odokotela banolwazi nolwazi olukwazi ukukusiza, kodwa okokuqala kudingeka uqonde ukuthi akekho owazi ingane yakho ngendlela owazi ngayo. Futhi nguwe omele aqonde ukuthi ingane izwa kanjani. Uma ingane ingenangqondo, akuyona into eyimzwisa ubuhlungu. Mhlawumbe ucela ukuthi ushintshe amathayi noma nje udinga ukunakwa kwakho. Thatha umntwana ezandleni zakho, ukhulume naye noma uzame ukugula - uma umntwana ehlisa phansi, khona-ke kulungile, uvele nje efuna ukunakekelwa nokunakekelwa.
Abazali abaningi bakhathazekile ngendaba yokudla okunomsoco. Odokotela bavame ukweluleka ukwethula imifino ekudleni ukuze banikeze wonke amavithamini adingekayo noma ukulandelela izakhi futhi bakhulise ingane eqinile futhi enempilo. Kodwa-ke, izingane, njengombuso, azijabuli neze ngokudla okunjalo. Ukusabela okujwayelekile kwengane ekudleni okunempilo "Angifuni, angiyikukwenza." Futhi njengomthetho, ukudla okuwusizo kakhudlwana, kutholakala ngokwengeziwe kwengane ngokungajabuli okukhulu. Ngokuqinisekile, ukudla okunempilo kuyisici esibaluleke kakhulu sempilo enhle kakhulu, kodwa lokhu akusho ukuthi yonke imifino enempilo iyadingeka ukusetshenziswa. Ungagcizeli kunoma imuphi umkhiqizo othile. Mhlawumbe kusuka emikhiqizweni eyahlukahlukene ekhona ingane ingakhetha into efanele futhi enhle. Zama zonke izinketho zokupheka - abilayo, uvimbe, uphethile futhi uqiniseke ukuthi ukhonza imifino efanelekile ukusetshenziswa ngendlela eluhlaza. Ukudla kufanele kube njalo futhi kuhlukaniswe, okungenani okungenani 4 kudliwa ngosuku, futhi ezinganeni, ukudla kwayo - ngokusho kwezidingo zomntwana.
Ngokuhlukile, kubalulekile ukusho ngokubaluleka kokuhamba ngaphandle. Ngokuvamile omama bayahamba nengane kuphela ngenkathi esemncane futhi esesitulo sabakhubazekile, futhi lapho izingane ezineminyaka ekhulile zikhetha ukuchitha isikhathi sokuzilibazisa nemifanekiso yokubukela i-TV noma ukudlala imidlalo yekhompyutha. Iningi loomama aliphikisana nalenhlangano yokuzilibazisa - kulula kakhulu futhi kulula, ungashiya ingane futhi wenze ibhizinisi lakho. Kodwa-ke, ngenxa yempilo yengane, kubalulekile ukunciphisa isikhathi esichithwa kukhompuyutha noma kwi-TV kuya okungenani, kodwa ukuhamba ngaphandle kufanele kuthathe okungenani ihora ngosuku. Lokhu kuyadingeka ukuqinisa ukuzivikela komzimba, ngoba ukukhulisa ingane enempilo, ukuhlala naye ku-TV, nakanjani kuyithole. Futhi amahora amade yodwa ngamakhathuni noma imidlalo ayithathi nje ekuthuthukiseni i-myopia, kodwa futhi ayithinte kabi ingane yengqondo.
Kubalulekile futhi ukuqapha ukuhamba kwengane. Indoda enomkhuba wokugodla umhlane wayo kusukela ebuntwaneni, uzogwema izifo eziningi kamuva, axhunyiwe hhayi kuphela ukuvinjelwa komgogodla, kodwa nokuhlukumeza kwezitho zangaphakathi. Abazali bakhohlwe ukulawula ukuthi ingane ihlala kanjani ngesikhathi semidlalo, amakilasi, ukufunda noma ukubukela i-TV, kodwa lokhu kuyinto ebaluleke kakhulu yezempilo. Umkhuba wokuhlaselwa okubi kubika ngokushesha, kodwa kunzima kakhulu ukuhlukana nawo.
Yenza ingane ibe yinto yokusebenza ngokomzimba ngendlela yokuzivocavoca nsuku zonke. Okunye okuwusizo ukubhukuda - akusiyo nje ukwakha isimo esifanele, kodwa futhi kuthuthukisa wonke amaqembu omzimba, kuqinisa ukuzivikela.
Ukugcwaliseka kwalemithetho eyisisekelo kuyokusiza ukhule ingane enempilo, naphezu kwazo zonke izeluleko odokotela. Iseluleko esibaluleke kakhulu ukulalela ngokucophelela ingane, ubukele futhi ukhumbule ukuthi zonke izingane zihlukile, futhi ukuthuthukiswa kwakhe ngeke kulandele isimo esivamile. Uma ingane ihlukana nakancane nemikhuba evunyelwe ngokuvamile, kodwa ngesikhathi esifanayo uzizwa ukhululekile-ungakhathazeki. Kodwa-ke, uma ukhathazekile ngokuthuthukiswa komntanakho, qiniseka ukuthi uthintane nochwepheshe ababili noma abathathu futhi wenze ukuhlolwa okudingekile. Njengoba ubona, ngokuphambene nombono odokotela, kungenzeka ukuba ukhule ingane enempilo futhi isebenzayo: i-tempered more, uchithe isikhathi esingaphandle, futhi ungasheshi ngokuthatha imithi, ikakhulukazi ama-antibiotics, ngoba lokhu kubangela umonakalo omkhulu empilweni yengane.
Izifo ezithathelwanayo zokuphefumula ezinobungozi ezinganeni
Okufihla ukuhlukumeza ikhanda kwengane
Ukwelashwa kwezinyawo ezincane ezinganeni
I-scalp eyomile enganeni
Izinkinobho ze-Chicken Pate
Ukuphindaphinda njalo kwengane. Indlela yokunquma izinga lesingozi?
I-Bagel enezimbewu ze-poppy
I-Horoscope ka-2015 nge-Aquarius
Indoda ethandekayo, dade othandekayo